Waa maxay sababta Iibsadayaasha ay uga hooseeyaan B2B E-commerce Personalization (iyo sida loo hagaajiyo) | Martech Zone
Talaado, Disembar 21, 2021 Talaado, Disembar 21, 2021 Tim Beyer
Waayo-aragnimada macaamiishu waxay muddo dheer ahayd, oo weli sii ahaanaysaa, mudnaanta koowaad B2B ganacsiyada socdaalkooda ku wajahan isbeddelka dhijitaalka ah. Iyada oo qayb ka ah isbeddelkan dhinaca dhijitaalka ah, ururada B2B waxay wajahayaan caqabad adag: baahida loo qabo in la hubiyo labadaba joogtaynta iyo tayada dhamaan khibradaha wax iibsiga onlaynka iyo offline Hase yeeshee, inkastoo dadaalka ugu wanaagsan ee ururada iyo maalgelinta baaxadda leh ee dhijitaalka ah iyo e-ganacsiga e-commerce, iibsadayaasha laftooda ayaa ah kuwo aan la dhacsanayn socdaalkooda wax iibsiga onlaynka ah.
Marka loo eego xogtii dhawaa ee Sapio Research ee iibsashada B2B, ku dhawaad ​​20% iibsadayaasha B2B maanta waxay dareemayaan in waayo-aragnimada macaamiisha ee ay internetka ku leeyihiin ay ka hooseeyaan kuwa ay ku leeyihiin khadka.
Warbixinta Iibka B2022B ee 2, Awooda Cilaaqaadka Iibka ee Horumarka B2B Adduunka Online
Warbixinta, ayaa waxaa u xilsaaray Ganacsiga Sana, waxay baari doontaa gobolka B2B khibradaha iibsadaha iyada oo loo marayo muraayadda isha ugu aqoonta iyo kalsoonida badan: iibsadayaasha laftooda. Ka mid ah natiijooyinka ugu xasaasisan? 1 ka mid ah 4tii iibsadeba waxay dareemayaan kalsooni ururradaas had iyo jeer waxay bixiyaan macluumaad sax ah oo ku saabsan alaab-qeybiyeyaashooda kanaalada onlayn iyo offline Oo haddii dhibcaha xogtaas ay wax ka sheegaan, waa in booska B2B uu leeyahay qol badan oo ay ku koraan indhaha macaamiisheeda.
Haddaba, sidee bay xaqiiqada wax-iibsiga B2B u eg tahay marka loo eego aragtida iibsadayaasha?
Iibsadayaasha B2B maanta waxay sameeyaan wax ka badan 428 iibsi ganacsi-muhiim u ah maalin kasta, iyagoo celcelis ahaan ku bixiya $3 milyan online sannadkii. Badankoodu waxay u jeestaan ​​goobta alaab-qeybiyaha e-commerce inay noqdaan kanaalka doorashada marka la dalbanayo dalabaadkan. Nasiib darro, si kastaba ha ahaatee, 1 ka mid ah 5 ka mid ah iibsadayaashan ayaa la kulma khaladaadka dalabka mar kasta waxay iibsadaan (iyaga oo tixraacaya xog aan sax ahayn, sida alaabada khaldan, alaabta, rarida, iyo macluumaadka qiimaha), sida caqabada koowaad. Ilaa 94% ayaa ka warbixiya arrimaha khibradaha macmiilka nooc ka mid ah habka iibka B2B. Waxaa laga yaabaa in si gaar ah loo xuso, iibsadayaashu waxay soo sheegeen farqi weyn oo u dhexeeya filashooyinka iyo xaqiiqada marka ay timaado awoodaha shaqsiyeynta khadka tooska ah ee B2B.
Waayo-aragnimada khadka tooska ah ee noocan oo kale ah ayaa dhibaysa macaamiisha B2B, su'aasha muuqata ee gacanta ku jirta waxay noqonaysaa: sidee ayay ururradu ula dagaallami karaan jahawareerka dhinaca iibsadaha? Iyo, muhiimad, waa maxay kharashka ma sidaas samaynaya?
Inta lagu jiro masiibo caalami ah, waxqabad la'aantu waxay ku kici kartaa shirkadaha ganacsigooda. La kulma horumar ama badbaado, Pepco ka faa'iidaystay Sana Commerce ee isku-dhafan ERP iyo e-ganacsiga e-ganacsiga, si loo bilaabo istaraatijiyad cusub oo suuq-geyneed sanadka 2020. Isku-dubbaridka e-ganacsiga iyo ERP waxa ay xaqiijisay hannaan la habeeyey iyo waayo-aragnimo iibsadaha B2B oo bilaa xad ah.
Habka isku-dhafan ee Sana ee ERP wuxuu ahaa mid qiimo leh oo ka caawinaya Pepco inuu noqdo 30-jir qaybiyaha shidaalka, saadka warshadaha iyo HVAC ee soo saaraha muhiimka ah iyo qaybiyaha badeecadaha baahida sare leh, sida gacmo nadiifiyaha iyadoo la adeegsanayo dukaanka internetka.
Iibsadayaasha B2B maanta way garanayaan waxay rabaan. Way garanayaan waxay filayaan. Waxayna diyaar u yihiin inay ka fogaadaan xitaa alaab-qeybiyeyaashooda sare haddii aysan helin.
62% ka mid ah iibsadayaasha B2B waxay dareemeen rajada ay ka qabaan mareegaha alaab-qeybiyeyaasha inay yihiin xoogaa, aad u yar, ama haba yaraatee lama kulmin. La yaab ma leh, natiijada, 4 ee 10 B2B ganacsiyada hadda waxay la kulmaan iska caabin ku saabsan kanaalka internetka ee macaamiisha. Laakin marka wax laga weydiiyo sifooyinka, shaqooyinka, iyo faa'iidooyinka iibsadayaasha do waxay rabaan inay ka arkaan B2B waayo-aragnimadooda e-ganacsiga e-ganacsiga, way caddeeyeen waxay rabaan inay beddelaan, iyo sida alaab-qeybiyeyaashu u horumarin karaan wax-soo-saarka khadka tooska ah.
Kala bar iibsadayaasha B2B ee la waraystay ayaa isku raacay in bixinta sida tayada wax soo saarka oo wanaagsan, la isku hallaynta oo hagaagtay iyo kalsooni dheeraad ah oo lagu qabo sumcadda alaab-qeybiyeyaasha, qiimaha tartanka iyo shuruudaha keenista, iyo adeegga macaamiisha oo tayo sare leh ayaa noqon doona arrimaha ugu sarreeya ee u horseedaya inay iibsadaan (oo dib-u-iibsadaan) alaab-qeybiyeyaal sare. Ka mid ah iibsadayaasha B2B ee wajahaya caqabadaha shaqsiyaynta gaar ahaan, waxaa jira liis dheer oo arrimood oo dammaanad qaadi kara heerka iibsadaha shakhsiyaynta run ahaantii rabto.
Marka lagu daro hagidda la fududeeyay iyo hubinta degdega ah, iibsadayaasha B2B waxay rabaan inay awoodaan inay arkaan helitaanka alaabta waxay si joogto ah u iibso. Waxay rabaan inay awoodaan inay arkaan oo wax iibsadaan iyagoo ku saleysan ay qiimaha u gaarka ah macmiilka, soo celinta iyo shuruudaha keenista, iyo 28% xataa waxay rabaan inay awoodaan inay la falgalaan chatbot yaqaana taariikhdooda dalabka. Way caddahay markaa, in iibsadayaasha B2B aysan kaliya niyad jabin. Waxay u baahan yihiin si ka sii wanaagsan waxayna dalbanayaan wax ka badan. Nasiib wanaag, Sana Commerce madal isku-dhafan ERP, Sana Commerce Cloud, waxaa loogu talagalay in lagu fududeeyo kakanaanta wax iibsiga B2B: ka faa'iidaysiga xogta ERP ee ururada B2B (sida xogta macaamiisha, macluumaadka alaabta, iyo qiimaha gaarka ah) si ay u awood labada sifo- iyo macluumaadka hodanka ku ah waayo-aragnimada macmiilka kuwaas oo ah isticmaale-saaxiibtinimo, habaysan, iyo la isku halayn karo.
Markaan ku sii jirno 2022, ururada si fudud u bilaabaya B2B e-ganacsiga e-ganacsiga oo sugaya amarada inay soo galaan, iyada oo aan diirada la saarin khibrada macmiilka, waxay si dhakhso ah u baran doonaan inaysan wax ku filan samaynaynin. Waayo-aragnimada liidata ee joogtada ah ee khadka tooska ah waxay sii wadi doontaa inay ka fogaato iibsadaha halkii ay u oggolaan lahayd kanaalka e-commerce inuu u adeego dakhli dheeri ah ganacsiyada B2B - oo ku hanjabaya inay maalgashi ballaaran oo e-ganacsiyeedka ka dhigi doonaan qashin ururrada aan awoodin inay helaan macaamiishooda khadka tooska ah. waayo-aragnimo ilaa heer, iyo dhawaan.
Tags: 2022 b2b warbixinta iibsadahab2biibsadaha b2bb2b shakhsiyaynta iibsadahab2b warbixinta iibsadahaganacsiga b2bb2b istaatistikada ganacsigasafarka macaamiisha b2bb2b shakhsiyayntab2b wax iibsigaERPPepcoshakhsi ahaaneedcaafimaad qabganacsiga sanasana commerce Cloudsapio cilmi
Tim Beyer waa COO caalamiga ah ee kor u qaadista tignoolajiyada Ganacsiga Sana, oo hadda saldhig u ah NYC oo ah Madaxweynaha iyo Maamulaha Gobolka Ameerika. Tim waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka haystaa maamulka ganacsiga caalamiga ah iyo laba shahaado Master oo ah maaliyadda (MSc) iyo sharciga maaliyadda (LLM, cum laude).
Waa maxay Xaqiijinta iimaylka? SPF, DKIM, iyo DMRC La Sharaxay